Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Drafitr'izao tontolo izao vaovao ho an'ny folo taona ho an'ny fiarovana ny lalana
Ny Plan dia mamporisika ireo mpiaro ny fiarovana ny lalana mba hampihenana ny fahafatesana sy ny ratra eny amin'ny arabe amin'ny alàlan'ny fantsona maro, anisan'izany ny fahitana tsara.
Ny fandefasana vao haingana ny Drafitra Maneran-tany ho an'ny folo taona amin'ny hetsika ho an'ny fiarovana ny lalana dia manamarika dingana lehibe amin'ny ezaka mitohy mba hiantohana ny fivezivezena azo antoka kokoa ho an'ny rehetra. Novolavolain'ny OMS sy ny vaomiera isam-paritry ny Firenena Mikambana, miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka 140 farafahakeliny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny UN Road Safety, ny drafitra dia mamaritra fomba iray izay mamelona ny fanapahan-kevitry ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana A/RES/74/299 momba ny “Improving Global Fiarovana ny lalana”.
Araka ny filazan'ny OMS, olona maherin'ny 3,500 no maty isan'andro eny an-dalana eran-tany - efa ho 1.3 tapitrisa ny fahafatesana azo sorohina ary tombanana ho 50 tapitrisa no maratra - mahatonga azy io ho mpamono ankizy sy tanora manerantany. Raha tsy misy fitsabahana, 13 tapitrisa no maty sy 500 tapitrisa naratra no tombanana hitranga ao anatin'ny folo taona manaraka.